PERIKOPA FJKM ALAHADY 19 OKTOBRA 2014 | FJKM Amboniloha
PERIKOPA FJKM ALAHADY 19 OKTOBRA 2014
MAHARITRA AMIN’NY FAMONJENA NY MINO
Jeremia 20:7-13 / Matio 25:1-13 / Jakoba 5:7-11
7 [Ny fitarainana nataon’i Jeremia] Jehovah ô, notaominao aho ka voataona; Nosamborinao aho ka resinao; Tonga fihomehezana mandritra ny andro aho; Izy rehetra dia maneso ahy.
8 Fa na oviana na oviana no itenenako, dia tsy maintsy mitaraina aho, eny, miantso aho hoe: Loza sy fandravana! Fa ny tenin’i Jehovah dia atao fanakorana sy fihomehezana ahy isan’andro.
9 Dia hoy izaho: Tsy hanonona Azy aho na hiteny intsony amin’ny anarany. Nefa izany dia tonga toy ny afo mirehitra ato am-poko, voahidy ato amin’ny taolako; Ary sasatra ny niaritra aho ka tsy mahazaka.
10 Fa reko ny endrikendriky ny maro, misy fampangorohoroana manodidina. Torio, eny, hotorintsika koa izy; Izay rehetra tsara fihavanana amiko dia miandry izay hahalavoako ka manao hoe: Angamba ho voataona Izy, dia horesentsika sy hovaliantsika.
11 Kanefa Jehovah momba ahy toy ny lehilahy mahery mahatahotra, ary noho izany dia ho tafintohina ny mpanenjika ahy ka tsy haharesy; Ho menatra indrindra izy, satria tsy hendry*. Fahamenarana mandrakizay izay tsy hohadinoina izany![Na: tsy ambinina]
12 Fa Hianao, Jehovah, Tompon’ny maro ô, Izay mamantatra ny marina ka mizaha toetra ny voa sy ny fo ho hitako ny famalianao azy, fa aminao no efa nanankinako ny adiko.
13 Mihirà ho an’i Jehovah, miderà an’i Jehovah; Fa Izy namonjy ny fanahin’ny malahelo tamin’ny tanan’ny mpanao ratsy.
1 Ary amin’izany ny fanjakan’ny lanitra dia ho tahaka ny virijina folo, izay nitondra ny fanalany* ka nivoaka hitsena ny mpampakatra.[*Na: fanilony]
2 Ary ny dimy tamin’ireo dia adala, fa ny dimy kosa hendry.
4 ary ny hendry kosa nitondra solika tao anatin’ny fitondrany sy ny fanalany*.[*Na: fanilony]
8 Dia hoy ny adala tamin’ny hendry: Mba omeo kely amin’ny solikareo izahay; fa efa ho faty ny fanalanay*.[*Na: fanilonay]
9 Fa ny hendry namaly ka nanao hoe: Sao tsy ampy ho anay sy ho anareo, fa mandehana mankany amin’ny mpivarotra ianareo, ka mividiana ho anareo.
10 Fa raha mbola lasa nividy izy, dia tonga ny mpampakatra, ary izay efa niomana dia niara-niditra taminy tao amin’ny fampakaram-bady, ary dia narindrina ny varavarana.
13 Koa amin’izany miambena ianareo, fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora.
7 [Toky ho an’ny Kristiana azom-pahoriana, sy anatra samy hafa] Ary amin’izany dia mahareta tsara, ry rahalahy, mandra-pihavin’ny Tompo. Indro, ny mpiasa tany miandry ny voka-tsoa amin’ny tany ka maharitra amin’izany mandra-pahazony ny ranonorana aloha sy aoriana.
8 Mahareta koa ianareo, mampahereza ny fonareo, fa efa mby akaiky ny fihavian’ny Tompo.
9 Aza mifampimonomonona, ry rahalahy, fandrao hohelohina ianareo; Indro, ny Mpitsara efa mitsangana eo anoloan’ny varavarana.
10 Ry rahalahiko, aoka ny mpaminany izay niteny tamin’ny anaran’ny Tompo no halainareo ho fianarana ny fandeferam-pahoriana sy ny faharetana.
11 Indro, ataontsika fa sambatra izay efa naharitra. Efa renareo ny faharetan’i Joba ary efa hitanareo ny faran’ny nataon’ny Tompo taminy, fa miantra indrindra ny Tompo sady be famindram-po.
Catégories :	Perikopa FJKM	/ par AnjGab 12 octobre 2014